I-SliTaz 4.0 etholakalayo: I-distro yama-PC ane-128Mb ye-RAM: D | Kusuka kuLinux
I-SliTaz 4.0 etholakalayo: I-distro yama-PC ane-128Mb ye-RAM: D
Namuhla Uhlobo lwe-SliTaz 4.0 (ukwabiwa okunesisindo esingaphansi kuka-40mb) ngemuva kweminyaka emi-2 yokukhula, ukulungiswa nokulungiswa.
I-SliTaz GNU / Linux Kuyindlela yokusebenza yamahhala esebenza ngqo kwimemori yekhompyutha, kusuka kumadivayisi akhishwayo njenge-CD-ROM noma imemori USB. Iyakhanya, iyashesha futhi iyafakeka ngokuphelele kwi-hard disk. SliTaz Isatshalaliswa ngefomethi yesithombe ye- I-LiveCD, ongayishisa kalula kwi-cdrom lapho ungaqalisa khona uhlelo ngokuhamba kwesikhathi. Njengoba uhlelo lusebenza, manje ungasusa ifayela le- I-LiveCD bese usebenzisa iyunithi yokufunda ezinye izinto. Yena I-LiveCD inikeza ukusatshalaliswa okuhlome ngokuphelele, kusebenza endaweni yokuqhafaza futhi ikuvumela ukuthi ugcine idatha yakho kwimemori USB. Uhlelo lunganwetshwa ngomphathi wephakheji I-Tazpkg, kanye nezibuyekezo zokuphepha zinikezwa ngezinguqulo ukupheka y uzinzile.
Le phrojekthi SliTaz futhi inikeza ukusekelwa kwamahhala kwezobuchwepheshe kubasebenzisi ngokusebenzisa Uhlu lokuposa (list i18n) kanye ne- Iforamu ngesiNgisi. Ungaxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane, iziphakamiso noma imibono, ngokusebenzisa uhlu lwamakheli noma ngqo ngeposi ku .
Isistimu yefayela yezimpande ithatha cishe i-100 MB nesithombe se-ISO ngaphansi kuka-30 MB.
I-Lighttpd web server, ngosizo lwe-CGI ne-PHP ngaphandle kwebhokisi.
Dlulisa amehlo ku-inthanethi noMidori noma iRetawq, ngemodi yombhalo.
Ukusekelwa komsindo ngesidlali somsindo se-Alsa nomxube, kanye nesiphepheli se-CD nesifaki khodi.
Imeyili, ingxoxo namakhasimende we-FTP.
Iklayenti leDropbear SSH neseva.
Injini yedatha ye-SQLite.
Isizukulwane sedivayisi ye-LiveUSB.
Amathuluzi wokwenza, ukuhlela noma ukushisa izithombe ze-CD noma ze-DVD.
Ideskithophu enhle ene-Openbox esebenza ku-Xorg / Xvesa (X server).
Amabhokisi ebhokisi enziwe enzelwe izinsiza zomugqa womyalo.
Ama-2300 amaphakheji afakwa kalula kunoma yisiphi isibuko.
Umphakathi osebenzayo nowamukela.
I-SliTaz GNU / Linux 4.0 iyahambisana nemishini eminingi enama-processor angama-i486 noma ama-x86. Kunconywa ukusebenzisa ubuncane bememori engu-192MB kule nguqulo ukusebenzisa i-LiveCD yize uhlelo olusha luzothola ngokuzenzakalela imemori yakho ukuqala izinsiza zememori ephansi, uma kunesidingo. ISliTaz inenqolobane enamaphakeji angama-3350 atholakala nakho konke okudingayo ukuguqula umshini wakho ube ideskithophu ephelele yemifanekiso (i-E17), isitudiyo sesithombe I-GIMP o I-Inkscape, noma umhleli wevidiyo noKino. Ungathola i-WWW ngemiyalezo esheshayo, i-VoIP, i-imeyili futhi, ngokusebenzisa isiphequluli sewebhu. Amaphakheji angatholakala ngomsebenzi wokusesha we I-Tazpkg, I-Tazpanel noma ngewebhusayithi: http://pkgs.slitaz.org/~~V
Ngokuzenzakalelayo, i-LiveCD ye SliTaz sebenzisa umphathi wewindi I-Openbox ngokukhanya kakhulu nokuzinzile. Ukuhlanganiswa kwe-taskbar ye- "lxpanel" kwenza kube nokwenzeka ukuhlinzeka ngamandla imenyu ngokuya ngamazinga we I-Freedesktop. Ukuphatha ideskithophu nezimpawu kungumsebenzi we I-PCManFM.
Ngokufingqa, lezi yizinguquko ezifanele kakhulu kule nguqulo:
Ngaphezu kwamaphakeji ayi-1000 engezwe ku-database.
Qala ngamasekhondi ayi-10 noma ngaphansi emshinini wanamuhla.
Ukucushwa okumaphakathi nephaneli entsha yokulawula.
Ithuluzi elisha lokwakha elikuvumela ukuthi udale amaphakheji weSliTaz ngomzuzu.
4 distros kokukodwa ku-LiveCD.
Isifaki esisha sokuqhafaza nesokuvuselela.
Amabhokisi amasha we-GUI namathuluzi wokwenza amasistimu aphilayo.
I-web boot ethuthukisiwe: ebhuth.slitaz.org
Iphutha le-4,0 ku-Wiki
Ungalanda .iso Iqinile y Testing (Ukupheka) kusuka kuzixhumanisi ezilandelayo:
Landa iSliTaz 4.0 | Landa i-SliTaz Cooking 4.0
Lapho ngiqeda ukuzilanda ngizozihlola kahle ukuze ngenze ukubuyekeza 😛
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-SliTaz 4.0 etholakalayo: I-distro yama-PC ane-128Mb ye-RAM: D
Ihlolwe kuma-laptops amabili futhi ayilayishanga nakoyedwa
I-Laptop1: ICorei5 4RAM
I-Laptop2: I-DualCore 3RAM
Yikuphi okunye ukusatshalaliswa okulula okuncomayo?
Ngalawo malaptops ngakho-ke ufuna ama-light distros? ungabeka noma yini oyifunayo
Ngoba ngifuna futhi ngiyakwazi ukubambisana 😀 kanye nelukuluku lokuzama
Hahaha, ilukuluku elikhulu kakhulu xD
umdlwane ongenayo i-jwm noma i-archbang
futhi kungani engakuthwalanga?
Yebo, ngenkathi i-kernel ilayisha, ihlala "inamathele" futhi ayiqhubeki nokulayisha, ngizamile zombili izinhlobo, ngizozama okunye ukusabalalisa okulula okuncomayo.
I-Puppy Linux, iSlitaz, i-Dawn Linux Encane 🙂
Sengivele ngiyilayisha! ISlitaz ingenye ye-distros engiyithandayo =)
Sengivele ngiyizamile enguqulweni engu-3.0 futhi kubukeka njenge-distro enkulu, ikakhulukazi ukutakula ama-PC amadala ^ ^
Ngemuva kokuyilinda kakhulu, kubuhlungu ukuthi basuse inguqulo ye-xvesa
I-distro enhle futhi elula kakhulu. Kunconywe kakhulu imishini enenkumbulo encane. Lapho ngiyinikeza ku-virtualbox ikhombise ukuthi idle ama-30mb enqama ekuqaleni, kuhle kakhulu!
Futhi ilayisha yonke into ngqo ku-RAM… ngokushesha okumangazayo kunenye i-distro ku-Corei7 HAHA.
Kufanele ngizame, angicabangi kanjalo. : NOMA
Ngine-archlinux + openbox ku-pentium III engiqala nge-40 mb. Futhi i-debian ene-lxde iqale ku-70mb. Akunasidingo sokucinga ama-distros angavamile asebenzisa okuncane.
Kunomehluko, futhi lokho ukuthi kula "ma-distros angavamile" womabili ama-kernel nama-binaries alungiselelwe ukusebenza kwi-hardware endala. Isibonelo, iSlitaz ihlanganiswa i-i486 ngenkathi i-Arch ihlanganiswa i-i686.
Esikhathini esithile esedlule angikhumbuli lapho ngifunda khona ngomuntu owayefuna ukubeka i-Arch ePentium I 133mhz futhi akakwazanga ngoba ukwakhiwa kwalowo processor yi-i586.
IConnochaetOS iyi-distro ebingasebenza njengoba ihlelelwe leyo ndawo yokwakha.
Ama-binaries angama-I386 angasebenza kahle ekwakhiweni kwezakhiwo okufana ne-i586 noma i-i686 kepha hhayi ngenye indlela, futhi uma enza, kungenzeka angasebenzi kahle.
Okungenani yilokhu engikuqondayo = P
Kepha i-debian iza nge-i386. I-Arch ayisebenzi emishinini emidala kakhulu.
futhi ubani owathi yebo?
Nge-Intel Pentium Dual Core E2140 yami ne-1GB yeRam, i-TT ayiqali futhi bengifuna kakhulu ukuyizama ...
Kubukeka njenge-distro enhle kepha, kuyiqiniso, uRidri uqinisile kuDebian futhi uma unesistimu elula kakhulu, inkinga kuba lapho ubeka izinhlelo ezisindayo kuyo nokuthi ukukhanya akusakhanyi kangako, yingakho uhlala udinga ama-distros angavamile njengoba usho.
Kumakhosombe e-debian ne-arch kukhona zonke izinhlobo zezicelo ezingasindi: i-midori, i-abiword, i-qmmp, i-pcmanfm, i-xfburn ... kanye nezinhlamvu ezingasindi ezifana ne-Con Kolivas.
Ama-distros alula enza kube lula ukuthi ungadingi ukusesha. Kepha uma ungumthandi we-debian noma i-arch uhlala unenketho yokubakhanyisa kakhulu. Inzuzo enkulu ye-debian ukuthi sinawo wonke amaphakheji womhlaba we-linux esinawo, noma ngabe akuyona inguqulo yakamuva.
Bekufanele ngisebenzise lolu hlelo kwesinye isikhathi ngoba ibhodi elisha le-m lishe kwaphela futhi bekufanele ngikhulule "elidala" kuphela lapho beligcinwe khona, belinama-222MB (abonakalayo) we-RAM ne-AMD Semprom. Ngikwazile ukulungisa i-conky futhi ngafaka i-emesene, yeza ne-midori ngokuzenzakalela futhi lokho kwakwanele kimi, kuyiqiniso ukuthi ngihlale njengomsebenzisi wale distro okungenani inyanga eyodwa futhi ngafunda ngesifaki sayo tazpkg okushesha kakhulu njengoba icindezela amaphakethe ayo ku-algorithm lzma ukuze kuthi ngesikhathi sokulanda / ukufaka kube esheshayo 😉
Ngiyayithanda le Distro0o0o0o0 😀
Lokhu uma ngiyivivinya ilungisiwe, ikuthembisa ukuthi isebenza kanjani; kufanele indize. Cishe njenge-Tiny Core.
Le distro yinhle, ngiyisebenzise kaningi ngaphezu kokunye ukuthola imininingwane emshinini ongazange iqale, kuhle ukuba nayo esandleni uma kwenzeka kwenzeka. Namuhla bengiyivivinya ku-Virtualbox futhi isebenza kahle kakhulu.
Thuthukisa ukuboniswa kwamafonti ku-Arch Linux